केपी वली राजनेता हुन्, उनकै नेतृत्वमा समृद्ध नेपाल सम्भव छ-शाही | गोठालो खबर – सूक्ष्म समाचार , डिजिटलको आधार
केपी वली राजनेता हुन्, उनकै नेतृत्वमा समृद्ध नेपाल सम्भव छ-शाही
सुर्खेत ७ मंसिर २०७८, मंगलवार १९:१२
करिब डेढ दशकदेखी राजनीति र समाजसेवामा तल्लीन रहेका जेबि शाही नेकपा एमालेको दशौँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट भएका छन् । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सम्पर्क कमिटीको अध्यक्ष समेत रहेका शाही काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएको लामो समय भैसकेको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला मिलेर बनेको सम्पर्क कमिटीको अध्यक्ष रहेका शाही जाजरकोटका हुन् । शाही विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरुमा पनि सक्रिय छन् । कर्णालीका विभिन्न जिल्ला बाट राजधानी काठमाडौँमा आएका मानिसहरूलाई बाटो देखाउने देखि सहयोग गर्ने काममा ऊनी अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । उनै शाहीसँगको संक्षिप्त अन्तर्वार्ता:
नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनुभएको छ, कस्तो छ तयारी ?
चितवनमा हुन गइरहेको नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशनका लागि मलाई प्रतिनिधि छनोट गर्नुभएकोमा सबैप्रती आभारी छु । पार्टीको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागिताले पक्कै पनि राम्रै योगदान हुने विश्वास लिएको छु । साथीहरूसँग सल्लाह गर्दैछु ।
१० औँ महाधिवेशनले एमालेलाई कस्तो नेतृत्व प्रदान गर्लारु तपाईँको आकलन के छ ?
१० औँ महाधिवेशनले नेकपा एमालेलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनेछ । सबल र शक्तिशाली नेतृत्वको चयन हुन्छ । पार्टी फेरिपनी एकढिक्का भएर अगाडि बढ्ने मेरो आकलन छ । केही साथीहरू टुक्रिएर गएका छन् , त्यसको खास असर छैन भन्ने सन्देश महाधिवेशनले दिनेछ ।
केपी वलीकै निरन्तरता कि तल्लो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण ?
केपी वली निर्विकल्प नेता हुन् , ऊनी राजनेता हुन् । नेकपा एमाले मात्र होइन ऊनी नेपाली राजनीतिमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि अहिलेसम्मकै निडर,विकासवादी र राष्ट्रवादी नेताको रूपमा हामीले लिएका छौँ । केपी शर्मा वलीलाई टक्कर दिने अर्को मान्छे पार्टी भित्र र बाहिर काहीँ देखिएको छैन ।
वली बिना एमाले नचल्ने होरु यसरी निरंकुशता हाबी हुँदैन ?
केपी वली बिना एमाले नचल्ने होइन, यो लाखौँ कार्यकर्ताको पार्टी हो । हामीले विगतका अध्यक्षहरूले नेतृत्व गरेको एमाले भन्दा कमरेड वलीले नेतृत्व गरेको एमाले कयौँ गुणा शक्तिशाली र राष्ट्रवादी देख्यौँ । अहिले पार्टीमा वलीको भन्दा राम्रो विचार, नेतृत्व कौशल र साहस अन्य नेतामा नदेखिएको कारण वली सर्वमान्य नेता हुन् ।
म फेरिपनी सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दछु, केपी शर्मा वलीले मात्र नेपाललाई विकास र समृद्धको नयाँ उचाइमा लैजान सक्छन्, देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सक्छन् र उनले भारले हडपेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता गर्न सक्छन् । उनको नेतृत्वमा देश बनाउन सबै लागिपर्नुपर्छ ।